पाटनका उदयमान मुटु रोग विशेषज्ञ डा.कुनाल बिक्रम शाहको अनुभव • Health News Nepal
✍️ डा.कुनाल बिक्रम शाह, सहायक प्राध्यापक वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ
१) तपाईं कसरी मुटुरोग विशेषज्ञ बन्ने अभिप्रेरित हुनुभयो?
– एमबीबीएस कोर्सको अन्त्यतिर हाम्रो क्लिनिकल पोष्टिङ हुने गर्दथ्यो। म आफ्नो फुर्सदको समयमा पनि अस्पतालमा गई मुटु रोगीहरुको धड्कन सुनी रोग पत्ता लगाउने कोशिश गर्दथे। यसरी यस बिषयमा मेरो अभिरुचि बड्दै गयो र यस बिषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने निधो गरे।
२) हृदय रोग सम्बन्धि उच्च शिक्षा शिक्षा हासिल कहाँ बाट गर्नु भयो?
– मैले आफ्नो सपना पछ्याउँदै College Of physicians and Surgeons Pakistan बाट प्रवेश परिक्षा उत्तीर्ण गरि FCPS Medicine and Allied Cardiology जस्तो उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाए। यस अन्तर्गत पहिलो दुई वर्ष Internal Medicine Punjab medical college pakistan बाट उत्तीर्ण गरे र पछिल्लो तीन वर्ष मुटुरोग विशेषज्ञता सहिद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रबाट सोही FCPS program अन्तर्गत अध्ययन गर्ने अवसर पाए।
३)अन्तर्कृयात्मक (Interventional) मुटुरोग विशेषज्ञता भनेको के हो ? यस सम्बन्धि सीप कहाँ गएर प्राप्त गर्नुभयो ?
– Interventional cardiology लाई नेपालीमा अन्तरक्रियात्मक मुटुरोग विशेषज्ञता पनि भनिन्छ । यो मुटुरोग विशेषज्ञताको एउटा उच्च बिद्या हो। जस अन्तर्गत बिरामीलाई चिरफार नगरीकन रक्तनली हुँदै मुटुको नशाका blockage खुलाउने (angioplasty),कृत्रिम ढकनिद्वारा मुटुको प्वाल टाल्ने (Device Closure),हात खुट्टाको नासामा भएको Blockage खोल्ने (peripheral angioplasty ), मुटुको चाल गडबड भएका बिरामीमा PACEMAKER/ICD जस्ता यन्त्र जडान गर्ने , र साथै साघुरिएका भल्भहरु खुलाउने देखि लिएर Artificial valve मुटुमा प्रत्यारोपण गर्ने कार्य पनि यसै बिद्या अन्तर्गत पर्दछ । यसमा पनि मेरो मुख्य विशेषज्ञता coronary , peripheral angioplasty र pacekmaker सम्बन्धित छ। यो बिधा वा सिप मैले South korea (Seoul )Hallym University बाट प्राप्त गर्ने अवसर पाए।
४) तपाईं हाल कुन अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ?
– म हाल पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा interventional Cardiology अन्तर्गत सहायक प्राध्यापकको पदमा काम गरिरहेको छु।र साथै बयोद्दा अस्पतालमा मुटुरोग बिभागीय प्रमुखमा कार्यरत छु।
५) मेडिसिटी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल छोडेर पाटन अस्पताल आउनुको मुख्य कारण के हो ?
– यसका मुख्य २ कारणहरु छ्न।
1) पाटन अस्पतालमा मैले प्राप्त गरेको सीपबाट गरीब निमुखाहरुलाई पनि सेवा प्रदान गर्न सक्दछु।
2) साथै मलाई अध्यापन गर्न पनि बिशेष रुचि छ। जुन अवसर पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको छ। यसरी म आफ्नो सीप र यस बिद्यामा हासिल गरेको विशेषज्ञता अरुलाई प्रदान गर्दै मेरो सीप लाई सदैवको लागि जीवन्तबनाउन चाहन्छु।
६) पाटनमा मुटुरोग सम्बन्धि के के सेवा प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ ?
– पाटन अस्पतालमा अहिले हामीले मुटुको धमनीमा भएको Blockage खोल्ने र जाली राख्ने(हृदय घातको आकस्मिक उपचार) को साथै मुटुको चाल गडबड भएमा pacemaker राख्ने सेवाहरु प्रबाह गरिरहेका छौँ ।
७) कसरी पाटन अस्पतालमा Angioplasty सेवा सुरु गर्नुभयो ? र के कस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नुभयो?
– वास्तबमा पाटनमा Angioplasty सुरु गर्नु एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य नै थियो।मेरा पाटनका अग्रजहरुले मलाई उत्साह मात्रै हैन प्राबिधिक तथा Logistic Support पनि प्रदान गर्नुभयो। मुटु रोगको शल्य चिकित्सा नभएको ठाउमा कतिले Angioplasty सुरु नगर्ने सल्लाह पनि दिनुभयो। तर मैले Cath lab Team संग समन्वय राखेर Angioplasty सुरु गरे र सफल भएजस्तोपनि लाग्दछ । बिदेशमा पनि Cardiac surgery नभएका ठाउँमा पनि सहज रुपमा Angioplasty भइरहेको उदाहरणलाई आत्मसात गरि अगाडि बढे र आफू यसमासफल भए जस्तो लाग्छ ।
मुटुको हृदयघात भएको अवस्थामा जाली राखी मुटुको नसा खुलाउने विधि( Primary Angioplasty)
८)अहिलेसम्म कति बिरामीको Angioplasty वा Pacemaker जडान गर्ने शल्यक्रिया गर्नुभयो?
– ठ्याक्कै तथ्यांक त म संग छैन तर पाटन र बयोधा अस्पतालमा मैले यो सेवा सुरु गरेको लगभग ३ वर्ष भइसकेको छ। मैले यो अवधिमा लगभग सय भन्दा बढी Angioplasty गरिसकेको छु। मुटुको चाल गडबड भइ आकस्मिक रुपमा pacemaker जडान गर्ने सेवा पनि गर्दै आएको छु।
९)अरु ठुल- ठुला अस्पतालहरुमा हृदयरोग सम्बन्धि सेवा हुदाहुदै पाटनमा हृदयरोग निवारणको निम्ति सेवा प्रवाह गरिनुपर्छभन्ने किन महसुस गर्नुभयो?
– हृदयघातमा समयको मुल्यांकन अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई हामीले Time is muscle पनि भन्ने गर्दौछौ।हृदयघात भए पश्चात् जति छिटो हामीले बिरामीको नशाको Blockage खोल्दछौ।त्यतिनै बढी मात्रामा मुटुको मासु र पम्प गर्ने क्षमता बचाउन सक्दछौ। यसकारणले गर्दा पाटन अस्पतालमा हृदयघात सम्बन्धि आकस्मिक उपचार समयमै उपलब्ध गराई धेरै बिरामीको ज्यान बचाउन सकिने बिश्वास लिएको छु।
१०) हृदयघात भनेको केहो ? यसको उपचार कसरी गरिन्छ? प्रकाश पारिदिनुहोस !
– हृदयघात भनेको मुटुको धमनिको वा नशाको भित्री परतमा जमेको बोसो फुट्न गई रगतको चोक्टा बन्दछ।यसरी मुटुको मासुमा रगतको प्रबाहमा अवरोध पुगी मुटुको मासु मर्दै जाने हुन्छ। यसैलाई हृदयघात भनिन्छ । यसको उपचार बेलुनको मद्दतले रगतको नशा आंशिक रूपमा खुलाउछौ र जाली राखी प्रबाह पुन संचालनमा ल्याउछौ। यसरी रगतको प्रवाह पुन संचालनमा ल्याई मासु मर्ने प्रक्रियामा रोक लगाएर बिरामीको ज्यान बचाउन सकिन्छ ।
११) हृदयघातका बिरामीले तपाईंबाट नवजीवन पाउँदा कस्तो अनुभुती गर्नुहुन्छ?
– जीवन र मरण डाक्टरको हातमै पुर्णतया हुन्छ भन्ने हुँदैन । दशौ वर्ष लगाएर पाएको सीपबाट कसैको रोग निको पार्न सक्दा मन हर्षित हुन्छ र जीवन सफल भएको अनुभुती गर्दछु।
१२) मुटुको नशा वा रक्तनलीमा Blockage भएमा सबैले Angioplasty गर्नुपर्छ?
– मुटुको Blockage भयो भन्दैमा सबै बिरामीले Angioplasty गर्नु पर्दछ भन्ने सोचाई भ्रम हो । हृदयघात भएको अवस्थामा यो उपचार रामायणको संजीवनी सरह नै हो। तर अरु अवस्थामा मुटुको धमनीमा भएको Blockage प्रथम चरणमा औषधि प्रयोग गरि नै ठिक गर्ने हो। Blockage का कारणले बिरामीको ज्यान उच्च जोखिम भएमा र औषधि प्रयोग गर्दा गर्दै छाती दुखिरहेको खण्डमा Angioplasty गर्नुपर्छ।
१३) आफ्नो प्रेरणाको स्रोत कसलाई मान्नुहुन्छ?
– म आफ्नो प्रेरणाको स्रोत सर्वप्रथम मेरो परिवार , मेरो गुरुजन , मेरा अग्रज साथीभाईहरु जो सदैब म संग मेरा चुनौतीको समयमा साथ दिई यो विशेषज्ञता हासिल गर्न अभिप्रेरित गर्नु भयो।यिनी नै मेरो प्रेरणाको स्रोत हुन।
१४) अन्त्यमा यस कोभिड- १९मा के यी सबै मुटुलाई जोगाउने उपचारहरु सहज रुपमा दिई राख्नुभाछ?
– यस कोभिड १९ को विषम परिस्थितिमा पनि म हर प्रयास गरि यी सबै सेवाहरु आफ्नो र बिरामी दुबैको सुरक्षालाई चाहिने सतर्कता अपनाई , सेवा प्रवाह गर्दै आएको छु र भबिष्यमा पनि गर्नेछु।
(पाटन तथा बयोधा अस्पतालका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ संग नमराज भट्टले गरेको कुराकानीको आधारमा)
Tags: #Mediciti hospitalArticalBayodha hospitalCorona Virus #Covid19Patan hospital